ကမ္ဘာကြီးကိုကတ်ကြေးများဖြင့်ပြောင်းလဲစေခဲ့သောလူသား - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် စက်တင်ဘာလ 04, 2019 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
Vide Sassoon ဗြိတိန် - အမေရိကန်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူပညာရှင်၊ စီးပွားရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာသူသည် ၁၉၅၀ နှင့် ၆၀ အတွင်းသူ၏အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ဝတ်ဆင်ခြင်းဆံပင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
Vidal ၏ရည်မှန်းချက်မှာဆံပင်ပုံစံများကိုကြာအောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်အလှည့်ကျစတိုင်များအတွက်အပတ်စဉ်ခရီးစဉ်နှင့်စောင့်ရှောက်မှုနာရီများကိုရှောင်ရန်ဖြစ်သည်။ Sassoon ၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်တိကျသောကတ်ကြေးဖြတ်ခြင်းနှင့်ဂျီ ometric မေတြီထောင့်များမှအမျိုးသမီးများ၏တစ် ဦး ချင်းအရိုးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သဘာဝဆံပင်ပုံသဏ္complementာန်တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောရိုးရှင်းသောဆံပင်ပုံစံများကိုဖန်တီးသည်။
Vidal Sassoon ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်တွင် ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အသက် ၁၄ နှစ်တွင် Vidal သည်အင်္ဂလိပ်အလှပြင်ဆိုင်၌ခေါင်းလျှော်ရည်ပြုပြင်သူအဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ငယ်ရွယ်စဉ်တွင်ဆံပင်ပုံစံများကိုသူလေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူအသက်ကြီးလာသောအခါလန်ဒန်တွင်ပထမဆုံးဆံပင်ညှပ်သမားအလှပြင်ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသူ၏ပထမ ဦး ဆုံးဖောက်သည်များထဲမှတစ်ခုမှာ mini Quirt ၏ဖက်ရှင်တီထွင်သူ Mary Quant ဖြစ်သည်။
Vidal Sassoon က ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Los Angeles Times သတင်းစာကို Vidal Sassoon က Vidal သည်တစ်ချိန်ကနာမည်ကျော်အမျိုးသမီးများကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင်ကိုရယူရန်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အောက်တွင်ထိုင်ရန်စောင့်ဆိုင်းရန်အချိန်မရှိဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုက ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန် ဦး ဆောင်စေသည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲစေမည့် Geometric Perm ။
ဒီအချိန်မတိုင်ခင်မင်းရဲ့ဆံပင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံဖော်မလဲ။ Australiaစတြေးလျရှိအလှပြင်ဆိုင်၌အပတ်တိုင်းအဆုံးသတ်သည်။ ဒီဟာကဆံပင်အလှပြုပြင်သူတွေ၊
Vidal သည်မကြာမီကျောင်းများဖွင့်လှစ်ပြီးဆံပင်ထိန်းသိမ်းရေးထုတ်ကုန်များနှင့်ကမ္ဘာကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲသောဆံပင်ပုံစံများတွင်တီထွင်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ သူ၏ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်အင်ပါယာကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူ၏အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုမှာ VS Sassoon ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးပစ္စည်းများ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်နိူးသူများအတွက်ခေတ်မီ။ ထူးခြားသောဆံပင်ပုံဖော်ကိရိယာများကိုပေးသည်။
ဆံပင်ပုံစံသည်ဆံပင်ပုံသဏ္inာန်တိုးတက်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုအတွက်အော်ဟစ်နေသောဆံပင်လုပ်ငန်းကိုမြင်တွေ့ရမည့်သူတစ် ဦး အကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ ခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်စတင်သောအရာသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနည်းစနစ်တစ်ခုနှင့်ဆံပင်အင်ပါယာကိုယနေ့တိုင်အောင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်အလှပြင်ဆိုင်ပညာရှင်အားလုံးအတွက်သြစတြေးလျတွင်ဆံပင်ညှပ်သည့်အခါတိုင်းဤတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Someone has madeamovie about Vidal Sassoon aka the man who revolutionized the world with scissors. It’s called “Vidal Sassoon: The Movie.” It’sa2009 documentary andanice look at Sassoon’s remarkable life. The man amassedafortune with his clever use of hair scissors, then focused on philanthropy. Pretty darn impressive!
Vidal Sassoon တွင်ကောင်းမွန်သောဇီဝဗေဒ သူကတကယ့်လူမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ ကတ်ကြေးနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လူအကြောင်းပိုလေ့လာချင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဤအကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်သင့်သည်။ ဒါဟာ Sassoon ရဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းအကြောင်းတင်မကဘဲသူ့ရဲ့ဆံပင်ဖြတ်ကတ်ကြေးနဲ့နည်းလမ်းအသစ်တွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲခဲ့လဲ။